घरमा दियो बाल्दा यो दिशामा फर्काएर बाल्नुहोस, बढ्नेछ तपाईको आयु – Medianp
Media NPप्रकाशित मिति: शनिबार, चैत ०२, २०७५११:०८
काठमाडौ । हिन्दू धर्मका अनुसार घरमा दियो बाल्नु निकै शुभ मानिन्छ । किनभने बेदमा अग्नीलाई भगवान मानिन्छ । त्यसैले घरमा दियो बाल्दा उज्यालोले दुख कस्ट भागी सुख शान्ति र ज्ञान प्राप्त हुने विश्वास रहेको छ । किनभने उज्यालो ज्ञानको प्रतिक हो ।
त्यसका साथै दियो बाल्नुको वैज्ञानिक कारण पनि रहेको छ । गाई को घ्युमा विभिन्न किसिमका रोगहरुलाई भगाउन सक्ने क्षमता हुन्छ ।त्यसैले यो घ्युको दियो बाल्नाले घ्यु आगोको संपर्कमा आएर बातावरण नै पवित्र बनाउछ । त्यसैले दियो हरेक शुभ कार्यमा बाल्ने चलन रहेको छ ।
त्यसका लागी दियो बाल्दा सधैं यो मन्त्र जप्नुपर्छ । दीपज्योति: परब्रह्म: दीपज्योति: जनार्दन:। दीपोहरतिमे पापं संध्यादीपं नामोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणमारोग्यं सुखं सम्पदां। शत्रुवृद्धि विनाशं च दीपज्योति: नमोस्तुति।
र दियो बाल्दा जहिल्यै पनि पूर्व दिशा तर्फ फर्काएर बाल्नाले आयु बढ्ने विश्वास छ । यदि दियो पश्चिम फर्काएर बाल्यो भने दुख ,घरमा अशान्ति छाउने विश्वास रहेको छ । त्यसैले दियोको प्रकाश आउने भागतिर सधैं पूर्व फर्काएर दियो बाल्नु होला ।
के तपाई भाडाको घरमा बस्नुहुन्छ ? त्यसो भए यी कुरामा ध्यान दिनुहोस् !
आज शुक्र ग्रहले राशी परिवर्तन गरेकाले अबको २६ दिन यी ४ राशीलाई हुनेछ लाभै लाभ
घरबाट टाढाको यात्रामा निस्कदै हुनुहुन्छ भने भुलेर पनि नगर्नुहोस् यी ५ गल्ती ! अशुभ हुनेछ !
महिनावारी भएकी महिलाले पूजाआजा गर्नु हुन्छ की हुँदैन ? जान्नुहोस
भोलि मंगलबार ,यी ११ मन्त्रहरु जपेर गणेश भगवानको पुजा गर्दा हट्नेछ सबै आर्थिक संकट